အပွငျမှာ တညျငွိမျသူဖွဈပမေယျ့.. ပရိသတျ တောငျးဆိုမှုအရ အရှကျတှေ ခါခြ.. ဖငျတှဘောတှေ ခါပွနရေတာပါ” ဆိုတဲ့ မမဆောငျး.. – Maythadin
May Thadin | January 27, 2021 | Celebrity | No Comments
ခဈြစဖှယျ အမူအယာလေးတှနေဲ့ ပရိသတျကို အမွဲဖမျးစားနိုငျစှမျး ရှိတဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသမီး တဈလကျကို ဖျောပွပေးပါဆိုရငျ မမဆောငျးကိုပဲ အားလုံးပွေးမွငျမိမယျ ထငျပါတယျနျော။
တခြိနျက ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာသာမက ရုပျရှငျတှပေါ ရိုကျကူးအောငျမွငျခဲ့တဲ့ မမဆောငျးဟာ ယခုအခါ ခဈြစဖှယျဟနျမူယာလေးတှေ အမြိုးမြိုးနဲ့ အှနျလိုငျးကွျောငွာလေးတှကေို လကျခံရိုကျကူးပေးနတော တှမွေ့ငျရပါတယျ။
သူကွျောငွာပုံလေးကို တမြိုးဆနျးပွီး သူမရဲ့အမူအယာလေးက ပရိသတျကို အူယားပွီးခဈြခငျဖှယျ ဖွဈစတောကွောငျ့ မမဆောငျးကွျောငွာသမြှ ကုနျပစ်စညျးတိုငျးဟာ လူစိတျဝငျစားမှု မွငျ့တကျလာတာကိုလညျး အားလုံးမကျြမွငျကိုယျတှပေ့ါပဲနျော။
ကွျောငွာရိုကျကူး သရုပျဆောငျနစေဉျမှာ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ပရိသတျအသညျးစှဲမမဆောငျးဟာ အငျတာဗြူးတှေ ဖွလေိုကျပွီဆိုတိုငျးမှာလညျး ပွောစမှတျတှငျစမေယျ့ စကားလုံးအဆနျးတှေ ဖွဈရပျလေးတှကေို ဖောကျသညျခပြွောပွတတျသူလညျး ဖွဈပွနျပါတယျ။
ဒီလိုသူမရဲ့ဟနျပနျအမူအယာတှနေဲ့ ပွောဆိုတတျမှုလေးတှကေပဲ ပရိသတျကို အခဈြပိုစလောပွီး အားပေးဝနျးရံသူတှေ ပေါမြားလာကာ ကိုဗဈကာလအကွပျအတညျးမှာတောငျ အနုပညာအလုပျဖွဈတဲ့ ကွျောငွာပေါငျးမြားစှာ လကျခံရိုကျကူးနိုငျနတောဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခါအငျတာဗြူးမှာလညျး မမဆောငျးတဈယောကျ ဘယျလိုစကားလုံးလေးတှနေဲ့ ဖွပွေီး ပရိသတျရဲ့အသညျးနှလုံးကို ခွှယေူထားလညျး ဖတျရှု့ခံစားကွညျ့လိုကျကွပါအုံးနျော. .ဝိတျကသြှားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးဟာ ဒါ့ကွောငျပါတဲ့ ” ဆောငျးကလေ ပထမတုနျးက ကိုဗဈကို ကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ ဝဝလှလှပဲ နတောပေါ့နျော.. အခုတော့ အလုပျတှကေ နကေ့ောညကောဆိုတော့ ဝိတျနညျးနညျးကသြှားတာပါ”
လူစိတျဝငျစားမှု မွငျ့တကျစခေဲ့တဲ့ ဆာဖာကွျောငွာကိစ်စကတော့ “ဆာဖာကလေ မငျးသမီးသူသူဟနျသာ သူကနိုငျငံခွားကနေ ဆောငျးနဲ့ကွျောငွာခငျြတယျဆိုတော့ ဆောငျးက ရိုကျပေးလိုကျတာပါ. .သူအရမျးကနြေပျတယျတဲ့အဓိကက လုပျငနျးရှငျတှေ ကနြေပျအောငျ ကိုယျလုပျပေးလိုကျတယျ.. အာ့မှာလေ မမဆောငျးကလေ ဆာဖာရှိလို့ရှိရငျ ဖငျခါစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ပွောပွီး ဖငျကို လှုပျလှုပျပွရတာလေ..
မမဆောငျးက အပွငျမှာ အတညျ.. အတညျဆိုပမေယျ့ ပရိသတျက အဲ့လိုခဈြတယျဆိုလို့ ကိုယျလုပျပွရတာလေ.. ကိုယျ့မှာကိုယျ့ရဲ့အရှကျကွီးကို ခှာခပြွီး ပေါကျကရတှေ လုပျပွရတာ ဖငျတှအေကုနျလုံး ခါပွနရေတယျ. .ကိုယျ့ရဲ့ဘဝကလညျး အဲ့လိုမြိုး. .တခြိနျတုနျးက မငျးသမီးဖွဈပွီး အခုကွျောငွာအပျဖွဈတဲ့ သူသူဟနျသာကလညျး သူကလညျး ကွိုကျတယျတဲ့.. တခြို့ကှနျ့မနျ့ ဆိုးဝါးတာတှေ ဝငျလာလို့ရှိရငျ လာလညျး တောငျးပနျတယျ။
ဟာ အရမျးအားနာတာ မမဆောငျးကလုပျခငျြလို့ မဟုတျဘူး ဒါရိုကျတာကလညျး လုပျခိုငျးလို့ သူ့မှာ လုပျရတာဆိုပွီးတော့ သူက ဝငျရှငျးပေးနတော ပိုငျရှငျကိုယျတိုငျကလေ.. ကြေးဇူးလညျးအရမျးတငျပါတယျ”ဆိုပွီး ပွောလာခဲ့ပါတယျ။
ကွျောငွာမြားရိုကျကူးရာမှာလညျး “မမဆောငျးက ကိုယျ့အိုငျဒီယာနဲ့ ကိုယျ့စတိုငျလျနဲ့ ကိုယျလုပျတယျ..ကိုဟျ့အိုငျဒီယာနဲ့ပဲ ကိုယျကွိုးစားတယျပေါ့..တဈခါတလကေလြို့ရှိရငျတော့ ဒါရိုကျတာတှကေလညျး အကွံပေးတယျ နှဈဦးနှဈဖကျ ညှိညှိနှိုငျးနှိုငျးလုပျတာပေါ့…ပရိသတျကို ပွောခငျြတဲ့စကားကတော့ “မမဆောငျး ပွောမှားဆိုးမှားရှိရငျ ခှငျ့လှတျပေးကွပါလို့.. မမဆောငျးက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ရှိလို့ ရိုးသားလို့ ခဈြသှားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှကေိုလညျး မမဆောငျးကြေးဇူးတှေ အမြားကွီးတငျပါတယျ
ပရိသတျအားပေးမှုတှေ အမြားကွီးရခဲ့လို့လညျး မမဆောငျးနတေို့ငျး အလုပျတှေ လကျနဲ့မပွတျအောငျ တောကျလြှောကျလုပျခှငျ့ရနတောလညျး အမြားကွီး ကြေးဇူးတငျပါတယျ..”လို့ ကြေးဇူးတငျစကား ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျနျော။
ချစ်စဖွယ် အမူအယာလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်ကို အမြဲဖမ်းစားနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး တစ်လက်ကို ဖော်ပြပေးပါဆိုရင် မမဆောင်းကိုပဲ အားလုံးပြေးမြင်မိမယ် ထင်ပါတယ်နော်။
တချိန်က ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာသာမက ရုပ်ရှင်တွေပါ ရိုက်ကူးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မမဆောင်းဟာ ယခုအခါ ချစ်စဖွယ်ဟန်မူယာလေးတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ အွန်လိုင်းကြော်ငြာလေးတွေကို လက်ခံရိုက်ကူးပေးနေတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။
သူကြော်ငြာပုံလေးကို တမျိုးဆန်းပြီး သူမရဲ့အမူအယာလေးက ပရိသတ်ကို အူယားပြီးချစ်ခင်ဖွယ် ဖြစ်စေတာကြောင့် မမဆောင်းကြော်ငြာသမျှ ကုန်ပစ္စည်းတိုင်းဟာ လူစိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာတာကိုလည်း အားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါပဲနော်။
ကြော်ငြာရိုက်ကူး သရုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပရိသတ်အသည်းစွဲမမဆောင်းဟာ အင်တာဗျူးတွေ ဖြေလိုက်ပြီဆိုတိုင်းမှာလည်း ပြောစမှတ်တွင်စေမယ့် စကားလုံးအဆန်းတွေ ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ဖောက်သည်ချပြောပြတတ်သူလည်း ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုသူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအယာတွေနဲ့ ပြောဆိုတတ်မှုလေးတွေကပဲ ပရိသတ်ကို အချစ်ပိုစေလာပြီး အားပေးဝန်းရံသူတွေ ပေါများလာကာ ကိုဗစ်ကာလအကြပ်အတည်းမှာတောင် အနုပညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့ ကြော်ငြာပေါင်းများစွာ လက်ခံရိုက်ကူးနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါအင်တာဗျူးမှာလည်း မမဆောင်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေနဲ့ ဖြေပြီး ပရိသတ်ရဲ့အသည်းနှလုံးကို ခြွေယူထားလည်း ဖတ်ရှု့ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါအုံးနော်. .ဝိတ်ကျသွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းဟာ ဒါ့ကြောင်ပါတဲ့ ” ဆောင်းကလေ ပထမတုန်းက ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဝဝလှလှပဲ နေတာပေါ့နော်.. အခုတော့ အလုပ်တွေက နေ့ကောညကောဆိုတော့ ဝိတ်နည်းနည်းကျသွားတာပါ”
လူစိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်စေခဲ့တဲ့ ဆာဖာကြော်ငြာကိစ္စကတော့ “ဆာဖာကလေ မင်းသမီးသူသူဟန်သာ သူကနိုင်ငံခြားကနေ ဆောင်းနဲ့ကြော်ငြာချင်တယ်ဆိုတော့ ဆောင်းက ရိုက်ပေးလိုက်တာပါ. .သူအရမ်းကျေနပ်တယ်တဲ့အဓိကက လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကျေနပ်အောင် ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်.. အာ့မှာလေ မမဆောင်းကလေ ဆာဖာရှိလို့ရှိရင် ဖင်ခါစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ပြောပြီး ဖင်ကို လှုပ်လှုပ်ပြရတာလေ..
မမဆောင်းက အပြင်မှာ အတည်.. အတည်ဆိုပေမယ့် ပရိသတ်က အဲ့လိုချစ်တယ်ဆိုလို့ ကိုယ်လုပ်ပြရတာလေ.. ကိုယ့်မှာကိုယ့်ရဲ့အရှက်ကြီးကို ခွာချပြီး ပေါက်ကရတွေ လုပ်ပြရတာ ဖင်တွေအကုန်လုံး ခါပြနေရတယ်. .ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလည်း အဲ့လိုမျိုး. .တချိန်တုန်းက မင်းသမီးဖြစ်ပြီး အခုကြော်ငြာအပ်ဖြစ်တဲ့ သူသူဟန်သာကလည်း သူကလည်း ကြိုက်တယ်တဲ့.. တချို့ကွန့်မန့် ဆိုးဝါးတာတွေ ဝင်လာလို့ရှိရင် လာလည်း တောင်းပန်တယ်။
ဟာ အရမ်းအားနာတာ မမဆောင်းကလုပ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး ဒါရိုက်တာကလည်း လုပ်ခိုင်းလို့ သူ့မှာ လုပ်ရတာဆိုပြီးတော့ သူက ဝင်ရှင်းပေးနေတာ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလေ.. ကျေးဇူးလည်းအရမ်းတင်ပါတယ်”ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ကြော်ငြာများရိုက်ကူးရာမှာလည်း “မမဆောင်းက ကိုယ့်အိုင်ဒီယာနဲ့ ကိုယ့်စတိုင်လ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်တယ်..ကိုဟ့်အိုင်ဒီယာနဲ့ပဲ ကိုယ်ကြိုးစားတယ်ပေါ့..တစ်ခါတလေကျလို့ရှိရင်တော့ ဒါရိုက်တာတွေကလည်း အကြံပေးတယ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းလုပ်တာပေါ့…ပရိသတ်ကို ပြောချင်တဲ့စကားကတော့ “မမဆောင်း ပြောမှားဆိုးမှားရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့.. မမဆောင်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိလို့ ရိုးသားလို့ ချစ်သွားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း မမဆောင်းကျေးဇူးတွေ အများကြီးတင်ပါတယ်
ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ အများကြီးရခဲ့လို့လည်း မမဆောင်းနေ့တိုင်း အလုပ်တွေ လက်နဲ့မပြတ်အောင် တောက်လျှောက်လုပ်ခွင့်ရနေတာလည်း အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..”လို့ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်နော်။
ပနျးခြီကားတဈခပျြကို ကွညျ့နရေသလို ခံစားသကျဝငျသှားစမေယျ့ မိုးဟကေိုရဲ့ ပုံရိပျမြား